Amagcisa kunye nabahambi B&B (Igumbi eliGreen)
I-Kerkenstein yindlu kasodolophu enembali, eyakhiwa ngo-1841 kwidolophu yaseHerwijnen, eNetherlands. Iyafumaneka kuye nabani na ofuna ukubaleka kwizixeko ezikhulu, ofuna umoya ococekileyo, uthanda ukukhwela ibhayisekile iindlela ezinde nezithe tyaba okanye ukwenza umculo, ukubhala imibongo ....
Igumbi elibanzi, eliluhlaza libekwe ngaphesheya kwegumbi elibomvu kumgangatho wokuqala kwaye linesitya kunye neshawari. Ukuba ukhetha igumbi elibomvu okanye ufuna ukubhukisha amagumbi amabini nceda ujonge kuluhlu lwethu lwesibini. Kulo mgangatho kukho indlu yangasese enye ekhoyo yeendwendwe, efikelelekayo ngepaseji enkulu. Siyathemba ukuba iindwendwe ziziva zisekhaya kuyo yonke indlu ngokonwabela amagumbi amakhulu okuhlala kunye neyadi yangasemva. Igumbi lomculo linepiyano enkulu kunye nekhithi yegubu.
Ifihlwe emva kwemithi emibini emidala ye-chestnut siyakwamkela kwisikhumbuzo sethu seSizwe saseKerkenstein ecaleni komlambo i-Waal. Yayikade ilikhaya likasodolophu wedolophu esembindini wedolophana yaseHerwijnen kwaye ngoku sele ‘likhaya lethu losapho’ kangangeminyaka engama-25.
Iindlwane zengwamza, amasimi eziqhamo, iinkomo ezitya amadlelo kunye nentsimbi yecawa ekhumbuza ixesha elidlulayo, nika iindwendwe zethu ukuziva zikude nesixeko esixakekileyo. Nangona izixeko ezininzi ezidala nezihle zikufuphi: IDen Bosch (imizuzu engama-30 ngemoto), iUtrecht (imiz. 30), iBreda (imizuzu engama-30), iRotterdam (imizuzu engama-40), neAmsterdam (imizuzu eyi-55).
Kwindawo ethe ngqo ezinye izinto ezintle kulula ukuhamba ukuya kuzo ngebhayisekile ukusuka kwindlu: Fort Asperen, Fort Vuren, Geofort, Castle of Loevestein, Glass-museum eLeerdam.
Hamba uyokubaleka kwipolder, ecaleni kweendlela ezinde, hlala ekhitshini nekomityi yekofu entsha ngelixa ufunda iphephandaba, dlala ipiyano kwigumbi lomculo okanye uchebe ingca yethu ukuba uziva ngathi :-)
Emva kwendlu esemva kweyadi kukho uthango olukhulu. Xa umi apho unokubona amathafa akhukulayo nangaphaya kwawo umlambo iWaal. Ke, yenza uhambo oluhle, i-paddle, iphupha okanye indawo yokuphumla.
Siyavuya ukukucebisa ngeendlela ezintle zokuhamba ngebhayisekile okanye iindlela zokuhamba intaba ujikeleze indlu. Siyakuthanda ukupheka kwaye wamkelekile ukuba uhlale kwisidlo sangokuhlwa kwitafile yethu enkulu yasekhitshini.